Farming Simulator 14 1.4.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.8 လြန္ခဲ့ေသာ7လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Farming Simulator 14
Farming Simulator 14 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်အပေါ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု Simulator မြား 14 ရှိသင့်စိုက်ပျိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Start! သင့်ရဲ့ကောက်ရိတ်သိမ်းအိပ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင့်ရဲ့လယ်ယာနှင့်၎င်း၏လယ်ယာထိန်းချုပ်ပါ။
အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့သန့်စင်ပြီးကြည့်အဖြစ်နှင့်ခံစားရတယ်, လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု Simulator မြား 14 သင်တို့ရှိသမျှကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း Case ih, Deutz-Fahr, Lamborghini, Kuhn, Amazon နဲ့ခရိုဏာအပါအဝင်စစ်မှန်သောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်သူတွေကနေပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ပုံစံကိုထိန်းချုပ်လယ်ယာစက်ပစ္စည်းများကို double အရေအတွက်, ပေးသနားတော်မူ၏။
- နယူးမြင့်မားကိုအသေးစိတ် 3D graphic နဲ့တစ်ဦး slick user interface ကိုလာမည့်အဆင့်သင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံယူ
- Wi-Fi နှင့် Bluetooth များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကဒေသခံထဲမှာ Multiplayer mode မှာအခမဲ့ရုမ်းမင်းကိုဖွင့်ကမ္ဘာမှာမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ Play
- စက်ရုံဂျုံစပါး, canola သို့မဟုတ်ပြောင်းနှင့်တစ်ဦးမှာ dynamic ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချ
- အမြင့်ဆုံးလေလံဆွဲရန်သူတို့၏နို့ကိုရောင်းချပြီးတော့, မြက် tedder Mow နှင့်သင်၏နွားမမှအစာကျွေးဖို့မြက်ပင် Bale ကိုဖန်တီးရန်က windrow
- အ Biogas စက်ရုံမှာမြက်ကိုသို့မဟုတ်ဖွဲရောင်းချခြင်းဖြင့်ပိုက်ဆံ Make
- သင့်ရဲ့အလုပ်အတူသင်တို့ကိုကူညီကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ထားသောလက်ထောက် Hire
Farming Simulator 14 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Farming Simulator 14 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Farming Simulator 14 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
superpocket စတိုး 2.54k 1.95M
Farming Simulator 14 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Farming Simulator 14 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.8
ထုတ်လုပ်သူ GIANTS Software
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.farming-simulator.com/privacyPolicy.php
Farming Simulator 14 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ